Fandaharan’asa “Fihariana” Hanohanana ara-bola ireo manana tetikasa
Nanomboka tamin`ny fomba ofisialy ny sabotsy lasa teo ny fandaharan`asa nasionaly “Fihariana” izay natao hampindramana vola amin'ny tahany ambany amin`ireo tanora sy ny vehivavy 18 hatramin'ny 58 taona manerana an’i Madagasikara,
izay manana faniriana hanangana na hanitatra ny orinasany ka hitondra fampandrosoana ho an’ny firenena. Eo anelanelan`ny 1 tapitrisa hatramin’ny 200 tapitrisa ariary no famatsiana ho azon’ireo tetikasa ireo. Any amin`ny antenimieran`ny varotra manerana ny nosy no hametrahana ny antontan-taratasy ho an`izay liana. 15 andro no handinihana ny tetikasa. Banky miisa roa sy ireo mpanome famatsiam-bola no miara-miasa amin`ny fitondram-panjakana ho fanohanana ny fandaharan`asa. Mitentina 200 miliara ariary ny petra-bola ao amin`ny Fihariana natao ho fanoitra ho an’ny tetikasan’ireo tanora Malagasy, ho fampiroboroboana ny famoronana asa, ny fampivoarana ny vehivavy sy ny tanora ary fampiroboroboana ny indostria.